Kalifadhiga 'California Streamin' | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » content abuurkii » Kalluunka Kalluunka ee California '
Kalluunka Kalluunka ee California '
Bal ka fikir meel qurux badan oo qorrax leh oo farxad leh sannadka oo dhan, halkaas oo muusikada tooska ah badanaa lagu sameeyo xeebaha quruxda badan ee u dhow nolosha habeenkii, baararka, iyo naadiga majaajillada caanka ah ee adduunka. In kasta oo ay tani u ekaan karto riyo fog badankood, Brian Sheil waa riyo rumowday.
Riyadiisa ah inuu ka shaqeeyo majaajillada iyo naadiyada muusikada ayaa Sheil u aaday magaalada yar ee Hermosa Beach, CA, oo ka mid ah dhowr jeclaa Los Angeles-area magaalooyinka xeebta ah ee tamarta hal abuurka iyo kartida dadku ku kacaan. Waa goobtan uu ka bilaabay shirkadiisa, Entertainment Services LA Inc., oo tan iyo markii uu ku faafay waddanka oo dhan, xafiisyo ku leh New Jersey iyo Las Vegas. Maanta, sida Shahaado Shahaadaysan NewTek Hawl wadeenka TriCaster iyo milkiilaha nidaamyo badan oo TriCaster, Sheil wuxuu naftiisa u arkaa macaamiishiisa '' Dream catcher '' sida uu u adeegsado TriCaster si ay ugu noolaadaan hibooyinkooda magaalada iyo gobolka uu jecelyahay.
“Maaddaama TriCaster ay tahay shirkad muuqaal leh oo hodan ku ah soosaarida fiidiyowga oo ah isku xirmo, xirmo mobilo ah, waxaan awoodaa inaan si dhaqso leh ugu diyaariyo raad-yar oo ka dhex jira naadi ama goob-faneed, oo aan u isticmaalo inaan soo saaro tayo sare, muuqaal multicamera muuqaal ah. u qulqula dhowr meelood oo isku mar ah, dhammaantoodba iyada oo aan la carqaladeynin horjoogeyaasha, hawl-wadeennada, ama ambience, ”Sheil ayaa sidaas yidhi. “Anigoo ah 'macmiil qaade riyo', farxad ayey ii tahay in hadda riyooyinka riyooyinka kale ee California ay noqdaan kuwo run ah - ayagoo soo bandhigaya dhacdooyinkooda warbaahinta iyo ficillada si loo arko, loo garto, laguna ixtiraamo farshaxankooda - TriCasterna way caawinaysaa aniga taas samee.
Mid ka mid ah riyooyinka California ee noocan oo kale ah waa Alan Sanford, oo ah milkiilaha naadi iyo dhiirrigeliya riwaayad heeseed oo muddo dheer ku riyoonayay inuu riwaayad muusik ka buuxo xeebta taasoo soo jiidan doonta kumanaan daawadayaal ah. Qaadashada riyadan sidii isaga u gaarka ah, Sheil wuxuu ka caawiyay Sanford isagoo soo saaray fiidiyowyo ku saabsan riwaayado aad u tiro yar iyo dhacdooyin maadaama uu si joogto ah u dhisay hannaan ku filan si uu u wareejiyo aragtidiisa weyn ee riwaayadaha. Sanadahaas oo dhan, Sheil wuxuu keenay mid ka mid ah nidaamyadiisa TriCaster, taasoo Sanford ka yaabisay kaliya waxa tiknolojiyadani sameyn karto.
Iyada oo la socota 'Bandhigga Muusigga ee' BeachLife 'dhowaan, munaasabad 3-maalin ah oo ay ka muuqdaan cinwaanno cinwaanno ah - sida Willie Nelson, Beach Boys' Brian Wilson, Jason Mraz, Ziggy Marley, iyo the Travellers Blues - riyadii riwaayadaha Sanford ayaa run noqotay. Falalkan ayaa la qabtay iyaga oo ka fulinaya laba marxaladood oo kala duwan xeebta Redondo, xeebta dadweynaha oo ku taal koonfurta xeebta Hermosa.
“BeachLife waxaa loo sameeyay mashruuc xamaasad leh si aan ugu gudbiyo xaflad heer qaran ah oo tayo sare leh bulshada aan ku soo koray, iyo sidoo kale in aan abuuro tusaale moodeel toos ah oo aan rumeysanahay, halkaasoo xaflad lagu qaban karo 20 illaa 50 jeer. dhagaystayaasha - oo ka baxsan kuwa jir ahaan u xaadira munaasabadda - iyagoo u gudbinaya si toos ah oo ah mid si toos ah loogu baahinayo, ”ayuu yiri Sanford.
Sanford ayaa intaa raacisay: “Iyadoo ay tahay tii ugu horreysay ee la rajeynayo in xaflado badan oo soo socda ay sii kordhayaan ayay muhiim u tahay in la kordhiyo raadadka bulshada iyo dijitaalka ah ee xaflad xilli hore si loo helo suuq iyo wacyigelin,” ayuu raaciyay Sanford. "Socodka tooska ah wuxuu udub dhexaadka u ahaa istiraatiijiyaddan xayeysiinta waxaanan aaminsanahay inay gacan ka geysatay guusha gaarka ah ee '' BeachLife 'gaartay'.
Intii lagu jiray xafladda, Sheil waxay sameysay xarun kantarool TriCaster taasoo cunaysa cago-yar oo lugo yar oo teendho ah oo ka hoosaysa teendhada ugu weyn halkaasoo Sawirro-dhaqdhaqaaqyada dhacdooyinka nool ay ku soo bandhigaan barnaamijka weyn ee fiidiyowga mobilada ee loo yaqaan 'NEP, Inc.'. dhacdooyinka durdurinta durdurinta tooska ah.
Isaga oo u shaqeynaya sida Maareeyaha iyo Maareeyaha Waxyaabaha, Sheil wuxuu qaatay barnaamijyadan quudinta ah TriCaster, iyo gacmo-gacmeed lagu daray-saddexaad iyo cinwaanno shaashadda oo dhan, astaamaha kafaala qaada, iyo walxaha kale ee garaafka ah markii uu baahinayay bandhiga. Waqtiyada qaar, wuxuu ku qulqulayaa full-rez, bitrate sare HD fiidiyowyo illaa shan meelood oo kala duwan, meelo aad u sarreeya (OTT), oo ay ku jiraan kanaalka 'BeachLife Music Festival YouTube', Sanford ee 'Liiska Live' ee kalandarka borotokoolka ee warbaahinta bulshada, iyo bogagga Facebook sameeya.
Isla mar ahaantaana, iyada oo bandhigyada ka socda ololaha 'BeachLife' ee labada marxaladood ee ugu waaweyn - oo loo yaqaan 'tide sare' iyo 'tide hoose', Sheil wuxuu kormeeray dhammaan fiidiyowga tooska ah iyo fiidiyeyaasha maqalka ah ee ku sii qulqulaya TriCaster. Waxa kale oo uu maareeyay warbaahinta ka socda wareejinta gudaha, DDR, kaararka garaafyada, kaararka heysashada, iyo CG sida ay si aan cilaaq lahayn ugu ciyaareen saacadaha 13 maalintii seddex maalmood.
Iyada oo qayb ka ah culeyskan shaqo badan, wuxuu sidoo kale galiyay oo isku daraa qeybaha fiidiyowga ee kamarado badan oo kala duwan ah - sida dib u soo kabashada, durbaanka dadka badan, iyo waxyaabaha kafaala qaaday — soosaarka barnaamijka iyo socodka tooska ah. Fiidiyowga barnaamijka ayaa laga soo diray TriCaster si uu u noqdo mid ka caawiya shaashadaha jumbo ee labada marxaladood ee udhaxaysa ficilada si loogu madadaaliyo dadka doqonimada ah halka howl wadeenada loo diyaariyey jilaayaasha soo socda. Fiidiyowyada dib-u-soo-celinta, oo ay kujiraan iftiimin ku saabsan dhacdooyinka maalin kasta, waxaa soo saaray kooxda Bandhigga 'BeachLife Festival'.
Sanford wuxuu yiri: “Brian's weynaha TriCaster, iyo sida ay uga go'an tahay inuu la sii joogo tikniyoolajiyadda xilligan jawiga is-beddelaya, waa qiimo weyn oo ay ku yeelan karto kooxda,” ayuu yiri Sanford. “Adoo ku dhex daraya dhowr nidaamyo fiidiyoow oo awood badan kombuyuutar, xarun dhexe, TriCaster waxay bixisaa heer fududayn oo aan aaminsanahay inay wax ku biirinayso bandhig faneed, aan dhibaato lahayn. 2020.
Sheil wuxuu sidoo kale ku faanaa inuu yahay jilaa ku riyoonaya Mike Lacey, oo ah milkiilaha majaajillada iyo Majic Club, oo ah majaajillo caan ah oo ku taal Hermosa Beach halkaas oo Jay Leno uu diin ahaan ku sameeyay ficilkiisa is-taagidda Axad walba ilaa 1978. Dhowr sano ka dib, Sheil wuxuu ka caawiyay Lacey naqshadeynta / dhisida kaabayaasha fiidiyowga ee qolka - oo ay ku jiraan iftiinka iyo maqalka - si TriCaster loo diyaariyo loona duubo “marka la soo baxo koofiyad,” Sheil ayaa yidhi. "Tan iyo markaas, waxaan halkaas ku samaynay durdurno badan oo nool kuwa badan oo shirkado madadaalo ah, iyo kuwo kale."
Shaqadiisa, Sheil wuxuu badanaa yimaadaa saacado yar ka hor bilowga bandhig kasta oo lagu abaabulayo kaamirooyinkiisa iyo sidoo kale TriCaster ee loogu beddelayo kamarado badan oo casri ah. Iyada oo la shaqeyneysa isku dhafan, TriCaster waxay u saamaxaysaa Sheel inuu maareeyo dhammaan dhinacyada soosaarka qulqulka tooska ah, inta badan isagoo ah hal nin oo duuban fiidiyoow.
Intii ay ka shaqeyneysay Bandhigga Muusigga ee BeachLife, Shaqada Sheil wuxuu sidoo kale sameeyay fidin ballaaran oo ka dambeysa dhacdooyinka iyada oo ay la socdaan shaqaalaha 'Screenworks', kuwaas oo aan caawin karin laakiin aan la dhacsaneyn waxa isaga iyo TriCaster ay sameyn karaan, gaar ahaan marka la barbar dhigo '40-input', bir culus. isku darka aragtida. Intii lagu guda jiray labadii maalmood ee soo-saarista fiidiyowga si loo diyaariyo loona dib-u-barto xafladda muusikada, munaasabad kale, Bandhigga Abaalmarinta Caalamiga ah ee Surfers, ayaa ka dhacay xeebta u dhow goobtooda.
Tan iyo markii Screenworks loo shaqaaleysiiyay inay ka shaqeeyaan labada dhacdo, qorshahoodu wuxuu ahaa inay qaataan badalkooda weyn isla markaana dib-u-habeeyaan iyagoo ku dhow abaalmarinnada dul-saarka. Laakiin Sheil waxay uga digtay in talaabadani ay sababi karto iyaga inay ku qasbanaadaan inay shaqeeyaan habeenka oo dhan si ay u helaan isbadalkooda oo ay dib ugu habeeyaan waqtiga loogu talagalay BeachLife.
Marka la barbardhigo, Sheil wuxuu soo jeediyey in TriCaster uu noqon doono dabin lagu dhaqaaqo oo la habeeyo, isla markaana waqti dheer ma aysan dhicin in Screenworks-ka ay aad ula dhacsan tahay dhaqdhaqaaqa TriCaster, ergonomics, iyo waxqabadka sare ee ay hadda ka fiirsanayaan inay iibsadaan si loogu isticmaalo sanadka soo socda Abaalmarinta BeachLife iyo Surfer Awards. Sheil, oo hadda ka caawin doona labada dhacdo, wuxuu tilmaamay in sanadka soo socda, isku xirnaanta NDI sidoo kale loo isticmaali doono isgaarsiinta IP-ku saleysan ee shabakadda. (Waxa kale oo uu ku faraxsan yahay in u shaqeynta saaxiibkiis Alan Sanford ay u gelisay meel uu ku dhaliyo Shaashadaha sida macaamiil cusub oo qabanaya shaqada uu jecel yahay.)
Tixraacyada iyo hadalka afka macaamiisha faraxsan waxay u fureen albaabyo badan oo fursado ah Sheel. Dhageysiga dhammaan macaamil kasta baahiyahiisa, hamigiisa iyo riyadiisa, Sheil wuxuu yidhi, "Inaad ku habboon tahay meesha saxda ah waqtiga ku habboon, waad ogtahay, meesha nasiibku ku gaadho diyaarinta, waxay iga caawisay inaan ku kobciyo ganacsigayga shaqada shabakadaha waaweyn ee warbaahinta, sida Comedy Central, MTV , VH1, CBS, Viacom, iyo dhuuni NBC Universal wuxuu muujiyaa sida The Voice and America's Got Talent. ”Sheil wuxuu kaloo ku mashquulsan yahay qibradaha suuq geynta khibradaha leh, sida shirarka Comic Con iyo Vid Con sanadle, iyo sidoo kale Suzuki shirweynaha caalamiga ah ee fiidiyowga bandhigyada, iyo Adobe Trade show videos.
"Xaqiiqdii waan ku amaanayaa TriCaster, iyo aqoontayda tikniyoolajiyadaas, ee samaynta shirkadayda, riyooyinyada Adeegyada Adeegyada LA ayaa rumoobay, iyo riyooyinkii asxaabteyda ee rumoobay," ayay tiri Sheil. “Ku haysashada TriCaster jeebka dhabarka dhammaan sannadahan ayaa i gelisay jagooyin aan ku caawin karo asxaabteyda, asxaabteyda, iyo kuwa aan isla shaqeyno iyaga oo si toos ah ugu baahinaya barnaamijyadooda weyn ee madadaalada iyo munaasabadaha madadaalada, oo ka dhigaya riyooyinkeenna California oo dhami inay rumoobaan.”
Waxaa loosoosaaray Shapeshifting NewTek iyo NDI® - December 9, 2019
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor Ott SJGolden - Spears & Fiilooyinka Video Engineer	2019-12-03
Previous: Kaamirooyinka Naqshadaha Madowga iyo Quwadaha Wareegayaasha Koonfur Afrika
Next: Jaamacada Full Sail University waxay iskaashi la sameysaa shabakadaha TVU si loo xoojiyo jiilka xiga ee isboortiga